अनशनको १८औं दिन बिहानै डा. केसीको यस्तो प्रतिक्रिया
साउन २६, २०७४ बिहिवार १५:४७:०० प्रकाशित
काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका योद्धा डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको १८ औं दिन पुगेको छ । तर, सरकारले उनका माग पूरा गर्न पहल थाल्नु त परै जाओस्, पछिल्ला पाँच दिनदेखि हालखबर सोध्न समेत छाडेको छ। यसैबिच चिकित्सा शिक्षाका माफियालाई लाभ पुग्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् ।
अनशन जति लम्बियो त्यति डा. केसी र उनका समर्थक गल्ने र यही अवस्थामा सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने सरकारको नियत देखिन्छ । यही सन्दर्भमा डा. केसीले आफू कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अनशनको १८औं दिनको बिहान दिएको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः
१. डा केसीको पक्षमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा अान्दोलन (फोटो फिचर)
२. सरकार र डा केसी पक्षधरबीच शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता हुँदै
४. नेपालमा एचआईभी एड्सका संक्रमितको संख्या घट्दो
५. डा केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन
६. चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हट्यो, संसद स्थगित
७. चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे स‌ंसदमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदबीच दोहोरी
८. शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण कक्ष तयार, चाँडै प्रत्यारोपण थालिने
९. डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल, जुनसुकै बेला मुटु बन्द हुन सक्ने खतरा
१०. 'सत्याग्रही भोकै छन्, नेपाली जनता रोएका छन्' नारा लगाउने मानवअधिकारकर्मी पक्राउ (तस्बिरहरु)
१. उता डा केसी गम्भिर, यता सरकारले काट्यो ७५ प्रतिशतले निःशुल्क डाक्टरी पढ्न पाउने प्रावधान
३. चिकित्सा शिक्षा : एकपटक गलत निर्णय गरेर दशकौंसम्म पछुताइरहने ?
४. डा केसी 'सेप्सिस'को उच्च जोखिममा, उपचाररत चिकित्सकमा बढ्यो चिन्ता
५. यसकारण मैले बन्ध्याकरणलाई गोप्य राखेँ : माइकल